नोकियाको सस्तो मोबाइल, दुईदिनसम्म ब्याट्री टिक्ने, बजार मूल्य कति ? | ictkhabar
54 minutes ago बैंकका कर्मचारीलाई ५ महिनासम्मको बोनस, कुनले कति दिए ?
6 hours ago चिनियाँ ह्याकरले विश्वभर साइबर आतंक मच्चाएको अमेरिकाको आरोप
7 hours ago दुबईमा ड्रोनको प्रयोग गर्दै गरियो कृत्रिम वर्षा
नोकियाको सस्तो मोबाइल, दुईदिनसम्म ब्याट्री टिक्ने, बजार मूल्य कति ?
Oct Sun 2020 11:38:32
काठमाडौं । एचएमडी ग्लोबलले नेपालमा नोकिया २.४ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । यो स्मार्टफोनमा ६.५ इन्चको एचडी प्लस स्क्रिन रहेको छ । भिडियो स्ट्रिमिङ र गेमिङका लागि यसले एकदमै रमाइलो अनुभव प्रदान गर्दछ । यसमा रहेको ४५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री दुई दिनसम्म राम्रोसँग टिक्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।
जसबाट तपाईंले आफूलाई मन पर्ने एप र गेमहरु ढुक्कसाथ खेल्न सक्नुहुन्छ । यसको असिस्टेड एडप्टिभ ब्याट्रीले गर्दा तपाईंले धेरै समय फोनमा विताउन सक्नुहुन्छ । तपाईं कुन एप बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने यसले थाहा पाउँछ र त्यसैअनुसार पावरलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
यसमा फिंगरप्रिन्ट र फेस अनलक जस्ता आधुनिक बायोमेट्रिक सेक्युरिटी फिचर पनि छन् । एन्ड्रोइडको प्रतिज्ञा अनुसार नोकिया २.४ मा तीन वर्षसम्मको मासिक सेक्युरिटी अपडेट र दुई वर्षसम्मको ओएस अपडेट मिल्नेछ ।
यसको अर्थ यो फोन एन्ड्रोइड इलाभेन र ट्वेल्भका लागि समेत तयार पारिएको छ । यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्दा यसमा सिरिजमै पहिलो पटक डुअल क्यामेरा भएको, एआई इमेजिंगबाट फ्युल्ड विस्तृत नाइट र पोट्रेट शट फिचर समावेश छ ।
यसमा भएको नाइट मोडमा एडभान्स इमेज फ्युजन र एक्पोजर स्ट्याकिंगबाट नोकिया २.४ ले अध्यारो अवस्थामा पनि जीवन्त विवरणहरु कैद गर्न सक्दछ । नोकिया २.४ को डिजाइन एकदमै टिकाउ प्रकृतिको छ । जुन केवल राम्रो देखिने मात्र नभएर टिकाउ पनि छ ।
प्रिमियम डिजाइन र नयाँ आधुनिक रंग, डस्कको सुविधा यो फोनमा रहेको छ । यसको थ्रीडी न्यानो टेक्स्चर कभर तपाईंको हातमा सुरक्षित रूपले बस्छ । यो फोन ग्रे रंगमा उपलब्ध छ । यसको स्टोरेजको कुरा गर्दा यसमा दुई जीबी र्‍याम र ३२ जीबी रोम रहेको छ । यो फोन नेपाली बजारमा १४ हजार ५९९ मा उपलब्ध हुनेछ ।
9 months ago 3712 views